Bad-maaxiin Pakistaaniyiin ah oo la sii daayay Galgaduud 16 Nov, 201111 Qofood oo dalka Pakistan u dhashay, ayaa dib u helay xorriyadoodii ku dhowaad sanad ay kooxo burcad badeed ah afduub u heysteen.
Dadkan u dhashay dalka Pakistan, ayaa la soo gaarsiiyay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaoliya waxaana iminka gacanta ku haya maamulka Ximan iyo Xeeb.
Raggaan ayaa waxaa ku jira kuwa da' ah inkastoo ay bad qabaan oo aysan wax xanuuno ah ka muuqanin, waxayna haatan ku sugan yihiin xarunta maamulka Ximan iyo Xeeb ee Degmada Cadaado.
Cumar Maxamuud Diiriye, oo ah mas’uulka maamulkaas u qaabilsan dhanka arrimaha bulshada ayaa waxa uu Radio Ergo u sheegay “Dadkaasi waa 11 nin oo u dhashay dalka Pakistaan in muddo ahna ku jiray gacanta burcad badeedda dadaal dheer oo uu sameeyay maamulka Ximan iyo Xeeb iyo dhalinyaro deegaanka oo is kaashaday ayaa keentay in dadkaasi ay xorriyadooda helaan ,raggaan waxay da’dooda u dhaxeysaa 30 illaa 70 sano.”
Mid kamid raga xorriyadooda dib u helay oo magaciisa ku soo gaabiyay Cabdulqaadir oo 60 sano jir ah ayaa yiri “Aniga waxaan ahay cabdulqaadir xaalkeennu waa fiican yahay, waxaan jiraa 60 sano waxaan dhammanteen ka soo jeednaa dalka Pakistan waxaan joogaa magaalada Cadaado oo aan soo gaaray shalay.”
Ma ahan markii ugu horreysay ee maamulkaan Ximan iyo Xeeb uu ku guuleysto inuu gacanta kus oo dhigo dad ay gacanta ku hayeen kooxaha burcad badeedda ee ku sugan gobolka ,waxaana ay sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxdaan burcad badeedda ah oo sida uu sheegay maamulka dadka ku haya dhibaato aan dhammaad laheyn. Cabdijamal/MG/FM Faallooyin